रेलवे स्टेशनमा गाउने 'रानु' रातरात हिट, जसको स्वर लता मंगेश्करको जस्तै छ !
रेलवे स्टेशनमा गाउने 'रानु' रातरात हिट, जसको स्वर लता मंगेश्करको जस्तै छ !
काठमाडौं - भाग्य कतिखेर बदलिन्छ भन्न सकिन्न। तर जब बदलिन्छ त्यो हामीले सोचेभन्दा निकै भिन्न भइदिन्छ। कतिपय अवस्थामा त त्यो सपना हो कि विपना छुट्याउनै सकिँदैन। भारतको पश्चिम बंगालको रानाघाट स्टेशनमा गीत गाएर गुजारा चलाउने रानूमण्डल यी दिनहरुमा यस्तै अनुभूति गर्दै छिन्।